TORITENY Alahady 06 Aogositra 2017 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 06 Aogositra 2017
Estera 9 : 1 – 15/ Lioka 21 : 20 – 28/ II Timonty 2 : 8 – 13
Tsy maintsy mandalo fijaliana ny mpanompon’Andriamanitra ; vavolombelon’izany Paoly Apostoly araka izay Epistily nosoratany ho an’i Timoty.
Tao am-pigadrana i Paoly no nanoratra izao Epistily izao ho an’i Timoty satria ity farany mbola tanora ka afaka manohy ny asam-pamonjena nankinin’i Jesoa Kristy taminy . Toy izao no votoatin-kevitra avy amin’izany Epistily izany.
I- Miaramilan’i Kristy aho : miaritra fijaliana
Izay rehetra mitonona ho mpanompon’Andriamanitra dia tsy maintsy manao asa lehibe noho Jesoa Kristy, dia ny asa-pamonjena ka tsy maintsy miaritra fijaliana [mpaneso , mpanaraby , mifofo ny aina avy ety ivelany , ny sitrapon’ny nofo tsy maintsy toherina avy ao anaty….]
Tsy maintsy miatrika ady ary manana faharetana raha te hahazo fandresena
Jereo ny fijalian’ny Jiosy tantarain’i Estera sy ny fandresena azony. cf Estera 9
Tandremo ny miverin-dalana.
Lesona : Tsarovy Jesoa Kristy Tompo izay nitsangana tamin’ny maty ka manahafa Azy.
cf II Timonty 2 : 8
II- Miaramilan’i Kristy aho : manana an’i Kristy ho Tompoko
Velona ato anatiko Jesoa Kristy . Resy an’ady mandrakariva aho raha manalavitra an’i Azy cf and 11-13.
Zavatra iainana mahazatra matetika ny mandray fanapahan-kevitra tsy miera amin’ny Tompo na dia efa Kristiana aza ka izay hitako fa mahamety ahy no ataoko avy hatrany.
Ahitsin’ny Tenin’Andrimanitra aho manomboka izao ; fa mialoha ny andraisako fanapahan-kevitra hanao zavatra , dia mila manontany ny hevitry ny Tompo aho.
Jesoa Kristy no mpanolo-tsaina ahy mialoha ny asa rehetra izay ataoko.
Lesona : Apetraho amin’i Jesoa Kristy izay mahakasika ny tenanao rehetra fa Izy manome anao fiainana vaovao isan’andro.
Mpanompon’Andriamanitra aho, dia miaramila mila mijoro, miaritra ny fanenjehana.
Mpanompon’Andriamanitra aho, mila mandray an’i Jesoa Kristy ho Tompon’ny fiainako mba hananako fahavelomana sy fandresena .